Maalinta: Noofambar 27, 2019
Bursa ayaa sii wadi doonta hogaaminta yoolalka maxalliga ah iyo kuwa qaran
Bursa ayaa sii wadi doonta hogaaminta yoolalka maxalliga ah iyo kuwa qaran; Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha Bursa (BTSO) Kulankii Golaha Nofeembar waa la qabtay. İsmail Kuş, Gudoomiye Kuxigeenka Gudiga Agaasimayaasha ee BTSO [More ...]
Sababta Saynas Wadada Tareenka Sababtoo ah sharciyada loo raacin waayey?
Sababta Saynas Wadada Tareenka Sababtoo ah sharciyada loo raacin waayey? ; 'Xeerar ku saabsan Tallaabooyinka iyo Mabaadi'da Hirgelinta ee lagu qaadayo Isgoysyada Heerka Tareenka' kaasoo dhaqan galay 2013 'wadooyinka oo leh gaadiid maalinle ah oo ka badan 30 kun oo gawaarida' [More ...]
800 Km saacaddii Giant Train AeroSlider
Si loo guuro tamar nadiif ah oo waara ee adduunka, naqshado badan ayaa soo ifbaxaya kuwaas oo dhiirrigelin doona teknolojiyadda. Waxaa dhiirigaliyay caqliga nashqadeynta iyo qoriga tareenka, tareenkan weyn ayaa ujeedadiisu tahay iskuxirka qaaradaha. Shirkadaha diyaaradaha, kuwa ugu adduunka [More ...]
Gawaarida TUDEMSAS waxaa loo adeegsaday gaari-garaashyada Swiss Wascosa
Gawaarida TUDEMSAS waxaa loo adeegsaday gaari-garaashyada Swiss Wascosa; Gawaarida xamuulka qaada ee alaabada la soo saaray iyadoo lala kaashanayo TÜDEMSAŞ-Qeybta Gaarka loo leeyahay waxaa la gaarsiiyay shirkadda Switzerland. 25 pcs Sgmmnss nooca 40 cagaha waxaa soo saaray iskaashiga ganacsiga iyo ganacsiga ee dowladu leedahay [More ...]
Madaxweyne Seçer wuxuu u mahadcelinayaa geesiga geesiga ah
Madaxweyne Seer wuxuu u mahadcelinayaa geesiga geesiga ah; Aziz Oğuz, oo ka shaqeeyay darawalka baska ee Degmadda Mersin Metropolitan, ayaa dhawaan saxiixay sheeko geesinimo. 63 sano jir ah Faruk, kaasoo wadno xanuun ku qabay baska uu adeegsaday [More ...]
Hoteel cusub oo loo yaqaan '3 Hotel' oo laga dhisi doono gegada diyaaradaha ee magaalada Istanbul
Codsi EIA ayaa loo sameeyay hudheelka inuu ku yaallo Magaalada City Airport oo laga dhisi doono garoonka diyaaradaha ee Istanbul oo laga hirgaliyay Arnavutköy. Kumanaan kun oo 750 ah ayaa maamuli doona 25 sanadka oo dhan IGA. Maamulka garoonka diyaaradaha ee IGA, Istanbul [More ...]
Jadwalka TRAVEL iyo Macluumaadka Jidka Khariidadaha Google
MACLUUMAADKA TRAVEL iyo MACLUUMAAD GUUD Khariidadaha Google; İZDENİZ A.Ş oo xiriir la leh İzmir Metropolitan Dowlada Hoose. wuxuu sii wadaa adeegsiga tikniyoolajiyada dijitaalka ah ee rakaabkiisa. Natiijada ka dhalatay wadahadaladii Google [More ...]
Boqolkiiba 98 ee Muwaadiniinta Sida YHT
Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha Cahit Turhan; 52 ayaa soo dhoweysay in ka badan hal milyan oo rakaab ah illaa iyo hadda. Wasiirka Turhan, 98 ayaa uga mahadcelinaya gaadiidka isku dhafka ah ee la bilaabay howlgalka YaanTha [More ...]
Qandaraaska Xawaaraha Sare ee Ankara Samsun waa in sida ugu dhaqsaha badan loo xaqiijiyaa
Qandaraaska Ankara Samsun YHT Line waa in sida ugu dhaqsaha badan loo xaqiijiyaa; Ku-xigeenka CHP Samsun Kemal Zeybek ayaa tiri, “In kasta oo khadka Ankara-Samsun lagu dhammeyn doono 2019, wali ma cadda goorta la dhamayn doono qadkaan. Xawaaraha Sare ee Ankara-Samsun [More ...]
Khidmadaha Marmaray Isbeddelka Lambarka Xarumihii La Socday
Kharashaadka Marmaray waxay ku kala duwan yihiin tirada saldhigyada la booqday; Nidaamka qiimaynta ee Marmaray, oo bilaabay inuu ku adeego wadarta joogsiga 43 bilihii la soo dhaafay, wuu ku kala duwan yahay tirada joogsiga. 5.5 sanadka oo dhan 5 [More ...]
Kooxda Ekol Logistics iyo Kooxda UBV ee Talyaaniga ayaa ku biiraya Ciidamada
Shirkadda loo yaqaan "Ekol Logistics", ee sii wadaysa kobockeeda caalamiga ah, waxay heshiis muddo dheer la saxiixatay Kooxda UBV ee Talyaaniga. Ekol ujeedadiisu waa inay kordhiso tayada adeegga iyada oo la ballaariyo laanta iyo shabakadda qaybinta. [More ...]
IETT Waxay Aasaastay Akademiyada Gaadiidka ee Darawalada
Sida ku xusan heshiiskii ay wada galeen UGETAM iyo İETT, ururka İBB, tababarka iyo shahaadada dhamaan wadayaasha, gaar ahaan shaqaalaha ,ETT. Akaademiga lagu dhisi doono, dhammaan xirfadleyda gaadiidleyda ee dalka oo dhan waa la tababari doonaa waqtiga. [More ...]
Abaal marinta Caalamiga ah ee Magaaladda Istanbul
Abaal marinta Caalamiga ee Magaalada Istanbul; Mashruuca Rafaa Turkey ayaa sii wadaan in ay yimaadaan abaalmarino caalami ah. Ugu dambeyntiina uguyaraan, metrooga Istanbul wuxuu ku yaalaa AEC Excellence Awards 2019 (AEC Excellence), oo ah mid ka mid ah ururada ugu sharafta badan adduunka. [More ...]
Shiinaha ee Generation iyo Turkey ayaa Muhiimadda Kordhinta of Xaaladda Project Road
Turkey uu Kordhinta Muhiimadda Macnaha of Project Belt iyo Road ee Shiinaha; Ankara ee initiative Central Corridor jeediyay muhiimadda ay leedahay Turkiga ee network ganacsiga kordhin ka Europe in Shiinaha uu noqon doonaa shayga ugu horeeya ee ajandaha Nederland kasta wadada Shirka Belt [More ...]
Maanta Taariikh: Shirkii Wadada Tareenka ee lagu qabtay Qaahira Janaayo 20, 1943
«Oktoobar Raadin »